शाकाहारी खाना खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा - ज्ञानविज्ञान
शाकाहारी भोजनमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटजस्ता तत्व पाइन्छन्, जो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छन् । यस्तै, फाइबर, क्यालोरी, भिटामिन पाइन्छन्, जसले विभिन्न रोगबाट मानिसलाई बचाउँछ ।शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिलाई मुटु रोग, पेट तथा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
हामी किन खाना खान्छौं ? जवाफ अनेक छन् ।
पेट भर्नका लागि । भोक मेट्नका लागि । स्वादको लागि । स्वास्थ्यका लागि । खासमा भन्ने हो भने, हामीलाई बाँच्नका लागि खानेकुरा चाहिन्छ । खानाले शरीरलाई आवश्यक पोषण दिन्छ । पोषणले शरीरका कार्य-संचालनमा सहयोग गर्छ ।
१५. खाना खाँदा टेबलमा राखेर खानुहोस्
१६. प्रशोधन नगरिएको मासु छान्नुहोस्
Don't Miss it यस्ता छन् फिटकिरी प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरू
Up Next हामीले दिनहु प्रयाेग गर्ने टुथपेष्टका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
21 hours ago mygyanbigyan